သူတပါးလူမျိုးကို ဖိနှိပ်ရင် ကိုယ့်လူမျိုးလည်း မလွတ်လပ်ဘူး | Bur-Imna
Tue 23 Feb 2010, နိုင်အာကာ
ပြည်ထောင်စုနေ့နှင့် ပတ်သက်၍ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နိုင်ဟံသာနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြေဆိုချက်
မေး။ ။ ပြည်ထောင်စုနေ့နဲ့ တိုင်းရင်းသား တို့အကြား ဆက်စပ်မှုကို ရှင်းပြပေးပါ?
ဖြေ။ ။ ပြည်ထောင်စုနေ့ဆိုတာ ပင်လုံစာ ချုပ် ချုပ်ဆိုတဲ့နေ့ကို အစွဲပြတာဖြစ်တယ်။ ပင်လုံ စာချုပ် ချုပ်ဆိုတာကတော့ ဗမာ့ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ကချင်၊ ချင်း၊ ရှမ်းအမျိုးသားခေါင်းဆောင်တွေအကြား ပူးတွဲပြီး ကိုယ်ပိုင်ဌာန်းခွင့်ရှိတဲ့ ပြည်နယ်တွေနဲ့ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတခု ထူထောင်ဖို့ သဘောတူချုပ်ဆိုတဲ့ ကတိသစ္စာပြုခြင်း ဖြစ်တယ်။
ဖြေ။ ။ ဒီလိုစာချုပ်ဖြစ်ခဲ့လို့ ကျနော်တို့ပြည် ထောင်စုဟာ အခုလိုဧရိယာ အကျယ်အဝန်း မျိုးနဲ့ ဖြစ်လာရတာပါ။ တကယ်လို့ ဒီလိုမလုပ်ခဲ့ရင် ရှမ်းပြည်နယ် ကချင်ပြည်နယ်တွေမပါတဲ့ တပိုင်းပြတ်နေတဲ့ နိုင်ငံပဲ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ သဘောတူညီချက်ထဲမှာ အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရှိတဲ့ ပြည်ထောင်စုမူအရ ပူးပေါင်းရေးဖြစ်တယ်။ အဲဒီတုံးက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခွန်းက မှတ်သားဖို့ကောင်းသလို ဒီနေ့လူတွေ အသိအမှတ်ပြုဖို့ လိုတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်က - ''ဗမာတွေ အင်္ဂလိပ်ကျန် မဖြစ်ချင်သလို ရှမ်းတွေ ကချင်တွေကိုလည်း အင်္ဂလိပ်ကျွန် မဖြစ်စေချင်ဘူး။ ထို့အတူ ဗမာ့ကျွန်လည်း မဖြစ်စေရဘူး'' လို့ ပြောခဲ့တယ်။ ဟိုတုံးက ခေါင်းဆောင်တွေ အမြင်ကျယ်ပြီး သဘောထားကြီးကြလို့ စုစည်းနိုင်ခဲ့တာကို နောက်လူတွေ လေးစားတန်ဘိုးထားသင့်တယ်လို့ မြင်တယ်။
မေး။ ။ ၆၂ - ခုနှစ် စစ်အာဏာသိမ်းတာကစပြီး အခုအထိ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခဏ်းကဏ္ဍ ဘယ်လိုရှိပါသလဲ?
ဖြေ။ ။ ၆၂ - ခုနှစ် ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း အာဏာသိမ်းတာဟာ တိုင်းရင်းသားတွေ လွှတ်တော်ပါလီမာန်ထဲကနေ သူတို့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ဖို့ စုပေါင်းတောင်းဆိုခဲ့တာကို မပေးချင်လို့ တိုင်းပြည် ပြိုကွဲတော့မယ်ဆိုပြီး အာဏာသိမ်းတာ ဖြစ်တယ်။ အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာ ပြည်နယ်တွေရဲ့ အခွင့်အာဏာတွေကို လျော့ချပြီး စစ်ဗိုလ်တွေက ဝင်ရောက်ချုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်။ ၆၃ - ခုနှစ်မှာ ဟန်ပြတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးခေါ်ပေမဲ့ လက်နက်ချခိုင်းတာမျိုးဘဲ ပြောလာတယ်။ ဒါကို တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က လက်မခံတော့ တပ်တိုးချဲ့ပြီး စစ်ဆင်ရေးတွေ အပြင်းအထန် လုပ်လာတယ်။ စစ်ရေးနည်းနဲ့ မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒကို အကောင်အထည်ဖေါ်ခဲ့တယ်။ တဖက်ကလည်း မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်အမည်ခံပြီး တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကို ကျင့်သုံးခဲ့တယ်။ ဒီလိုစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ကျင့်သုံးလာခဲ့လို့ လူမျိုးရေးအရ လွတ်လပ်နေတဲ့ ဗမာတွေဟာ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးလာခဲ့ရတယ်။ ဒီမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့် ပြည်တွင်းစစ် ကျယ်ပြန့်လာပြီး လူမျိုးစုအခွင့်အရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးရတယ်။ တိုင်းပြည်လည်း တရစ်ပြီးတရစ် မွဲပြာကျလာခဲ့ရတယ်။ ဒီနေ့တော့ ဗမာတွေလည်း ဒီဒဏ်ကို အပြင်းအထန် ခံနေရပြီ။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ တန်ဘိုးကြီးတဲ့ သဘာဝသယံဇာတတွေ မျိုးစုံ ကုံလုံကြွယ်ဝပေမဲ့ အာဏာရ အထက်တန်းလွှာတွေက လွဲပြီး လူမျိုးစုံပြည်သူတွေ ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရတာ အားလုံးအသိ ဖြစ်တယ်။
ဖြေ။ ။ တိုင်းရင်းသားတွေဟာလည်း ဗမာတွေလိုပဲ မျိုးချစ်စိတ် ရှိကြတာပါပဲ။ ဗမာတွေ အင်္ဂလိပ်၊ ဂျပန်တွေအောက်မှာ မနေချင်လို့ ရုန်းကန် တော်လှန်ကြသလို တိုင်းရင်းသားတွေလည်း ရုန်းကန်ကြမှာပါပဲ။ ဒီသဘောကို ဗမာတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ချင်းစာ နားလည်ပြီး အဖြေရှာသင့်တယ်။ တကယ်လို့ ဆက်ပြီးဖိနှိပ်ဝါးမျိုနေမယ်ဆိုရင် အနိမ့်ဆုံးတော့ ပြည်တွင်းစစ်သံသရာက လွတ်ကင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်နေရင် စစ်တပ်ကို အားကိုးနေရမယ်။ စစ်ဗိုလ်တွေ သြဇာရှိနေမယ်၊ ဒါကြောင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ် သက်ဆိုးရှည်နေဦးမှာပဲ။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေ ဆိတ်သုဉ်းနေလိမ့်ဦးမယ်။ စီးပွားရေးဘက်မှာလည်း မွဲပြာကျမြဲ ကျနေပါလိမ့်မယ်။ အစိုးရဝန်ထမ်း အထူးသဖြင့် လက်နက်ကိုင်ထားသူတွေ စာရိတ္တပျက်ပြားပြီး အာဏာကို အလွဲသုံးစား ကျင့်သုံးမယ်။ အဲဒီလိုအာဏာပိုင်တွေ ပိုမိုအခြေခိုင်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီပုံမျိုးနဲ့ ကြာနေရင် ပြင်ဖို့ လွယ်မှာ မဟုတ်သလို နောက်ဆုံးမှာ ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ပြိုကွဲပျက်စီးသွားတဲ့အထိ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ ကျနော်မြင်တယ်။ ဒီမှာ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ ပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခွန်းကို ကျနော် ပြောပြချင်တယ် ''သူတပါးလူမျိုးကို ဖိနှိပ်ရင် ကိုယ့်လူမျိုးလည်း မလွတ်လပ်ဘူး'' ဆိုတာပါပဲ။
Posted by ၜLet's wake up and fight for mon independence! at 1:55 AM